Ama-Out-Of-The-Box Izindlela Zokuthuthukisa I-SEO Yakho Ne-Social Media - Insight From Semalt
Ingabe ufisa ukuba ngcono isimo sakho ezinjini zokusesha?
Unesithakazelo ekusebenziseni imidiya yezenhlalo ukwandisa ukusebenza kwakho kwe-SEO?
Imithombo yezokuxhumana inezinzuzo ezinkulu emiphumeleni yakho yokusesha, futhi aUkubuswa kwezenhlalo ngokucacile kungathuthukisa isikhundla sokusesha.
Kule ncwadi yokubhala, uJason Adler, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt Amasevisi weDivaysi, inikeza izindlela ezinhlanu, ongasebenzisa ngazo imithombo yezokuxhumana ukuze uthole kangcono izikhundla zakho zokusesha.
# 1: Qala izixhumanisi namanethiwekhi wakho omphakathi
Ngaphambili, ukuhlelwa kwe-Google kusekelwe kusizinda sokuxhumanisa kungakhathaliseki ukuthi yiniikhwalithi yezixhumanisi umuntu ayezicabangela - soil moisture monitoring. Kamuva, i-Google iqalile ukucabangela ikhwalithi yesixhumanisi ngemuva kokuqaphela ukuthi abantubabesebenzisana ngezigaba ngokusebenzisa ukusetshenziswa kwama-fake links.
Njengoba izingosi zenhlalo zisekelwe kumphathi wewebhu, izixhumanisi kulawa masayithi zikhonangokuvamile kubhekwa njengekhwalithi ephakeme. Ngisho uma kwenzeka unekhasi elisha le-Facebook, cishe lizobe liphezulu ngenxa yokuthiIgunya eliphelele le-Facebook.
# 2: Ukwandisa inombolo yabalandeli bakho
Amasayithi anenani elikhulu labalandeli bekhwalithi eliphezulu abhekene kangcono ekusesheniizinjini. Abalandeli abaphakanyisiwe kakhulu kuma-platforms wakho wezokuxhumana, futhi inani elikhulu lalaba bantu lihlanganyela noma lihlanganyeleezinye izindlela.
Ingxoxo ingaba ngendlela yokubuyisa okuqukethwe kwakho, ukuphendula izikhonkwane,ukubhala izibuyekezo ku-Google + noma ngisho nokuthumela i-tweet..Njengalokhu, qiniseka ukuthi inani labalandeli bakho liyanda kancane.
# 3: Qinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kuyabelana futhi kuyasesha
Isiteji senhlalo njengePinterest yenza ukwaziswa kwakho kubenze futhiukusesha. Isiteji sithuthukisa ukwabelana ngokuphawulekayo. Abasebenzisi babhalela izikhonkwane zentshisekelo yabo kumabhodi abo futhi basakaza kwabanyeAbalandeli be-Pinterest.
Ngokwesibonelo, ungenza okuthunyelwe kwakho ku-Facebook ukusesha ekusesheniizinjini ngokuya kuthebhu yokubeka ubumfihlo ku-Facebook nokuvumela ezinye izinjini ukuxhuma kumugqa wakho wesikhathi.
# 4: Qinisekisa ukuthi okuthunyelwe kwakho kusebenzisa amagama angukhiye
Amagama angukhiye abalulekile kusayithi lakho, imikhankaso yokukhangisa, kanye nebhulogi, ngakho-ke,akufanele kusimangaze ukuthi amagama angukhiye abalulekile ngokuqukethwe kwakho kwezenhlalo.
Ku-Pinterest, indlela eqinisekile yokubeka isikhundla esingcono ezingeni lokuseshaukuqinisekisa ukuthi amabhodi akho noma izikhonkwane zinamagama angukhiye. Ngokufanayo, ukwenza ucwaningo kumavidiyo we-YouTube kungandisa ukwandisa kwi-blog,isiteshi, newebhusayithi uma zigqanyisiwe kuphrofayela yakho.
Ukusebenzisa amagama angukhiye ezikhundleni zakho ze-Facebook nakho kungabangela ukuhlelwa okungcono.
Amagama angukhiye aqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kuyasesha futhi uma abasebenzisi befunakulawo mazwi, okuqukethwe kwakho kuzoba ngowokuqala ukuphuma.
# 5: Yenza uhlu lwendawo
Qinisekisa ukuthi ukuhweba kwakho kunokwezifiso ezihlelwe ku-Google + enakhoidatha efanele nekheli. Lokhu kuzokwenza amakhasimende akho abukeze inhlangano yakho ngokuqondile ku-Google.
Ukusebenzisa amasayithi omphakathi njengokungenelela kokumaketha kunconywa kakhulu, kodwakungathuthukiswa ngisho ngokuqhubekayo ngokuyisebenzisa ukuze kuthuthukiswe i-SEO.
Umuntu angaqiniseka ukuthi amasayithi omphakathi angathuthukisa i-rankings.